Nsogbu banyere ibipụta Live Writer na WordPress
Na nso nso Live Writer malitere ịkpata nsogbu, ma ọ dịkarịa ala ikpe abụọ: 1. Mgbe ị na-emepụta isiokwu ọhụrụ, ibugo ya na-eziga ozi ezighi ezi ọ bụ ezie na ebuputara isiokwu ahụ. Mgbe ahụ, mgbe ị na-achọ ọzọ, mepụta isiokwu ọhụrụ nke na n'oge ị na-ahụ ikpe ahụ, enweelarị ọtụtụ isiokwu bipụtara ...
3 WordPress plugins uru ịkwụsị na
WordPress na-anọchite anya otu n'ime ihe atụ kachasị mma banyere otu Open Source nwere ike isi bụrụ azụmaahịa azụmaahịa nke onye ọ bụla na-erite uru site na ọnụahịa enwere ike ịnweta yana n'okpuru ọnọdụ ọrụ na-agaghị enwe anyaụfụ ihe nlereanya ahụ. Ọ bụ ihe na-erughị n'elu ikpo okwu nke ha na-n'ịnyịnya ọzọ ...
Internet na Blogs, Nkwado Blog
Cybernetics, nnukwu ọrụ ezumike
Taa enwere ọtụtụ ọrụ nnabata n'efu, dị ka Wordpress.com na Google Blogger ugbu a na-akpọ Google Blogs. Mana oge na-aga, saịtị ndị tozuru etozu na ụlọ ọrụ chọrọ ọrụ nke na-ekwe nkwa nchekwa maka uru akụ na ụba na nke ụlọ ọrụ nke ọnụnọ na Internetntanetị na-anọchi anya. Ọzọkwa na nke a enwere ụzọ ọzọ dị iche iche; na…
Kedu ihe bụ New na WordPress 3.3 Sonny
Ọhụrụ WordPress nke rutere kpọmkwem mgbe afọ 2011 na-agwụ, na-eweta ụfọdụ ozi, ọ bụghị ọtụtụ mana ọ dị mkpa: Na mpaghara ebe enwere mgbanwe, a na-ewelite balloon ịdọ aka na ntị oge mbụ ejiri ya, na-egosi mgbanwe. Mgbe ahụ ogwe aka ekpe ugbu a kama ịkọwapụta n'abis ...
Mepụta thumbnails na Njikọ Post thumbnails plugins
Oge ụfọdụ gara aga m tufuru Arthemia, ndebiri nwere ezigbo ọmarịcha maka WordPress ma nwee ụta nke iwulite onyonyo onyonyo ya na arụ ọrụ mpụta nke na-eweta nnukwu nsogbu na oriri nke obosara. Mgbe ọtụtụ tiketi nke ndị nchịkwa HostGator welitere, ekpebiri m ịchekwa ndebiri maka ...
Ihe kariri otu ihe ihe dika ihe a emeela anyi, na mgbe anyi abanye na saịtị nke anyi ozi na - egosi: Amachibidoro I nweghi ikike iji nweta /index.php na sava a. Ọzọkwa, enwere nsogbu 403 Machibidoro Iwu mgbe ị na-anwa iji ErrorDocument mee ihe gbasara arịrịọ ahụ. Apache mod_fcgid / 2.3.5 mod_auth_passthrough / 2.1 mod_bwlimited / 1.4 FrontPage / 5.0.2.2635 Server…
Ngwaọrụ iji tụnyere koodu ma ọ bụ folda
Anyị na-enwekarị akwụkwọ abụọ anyị chọrọ iji atụnyere. Ọ na - abụkarị mgbe anyị tinyere mgbanwe isiokwu na WordPress, ebe faịlụ php ọ bụla na - anọchite akụkụ nke ndebiri ma anyị amataghị ihe anyị mere. Dị ka mgbe emetụ Cpanel anyị ihichapụ a file, ma ọ bụ a na nchekwa adịghị rụchaa na-ebugote site ftp. Oge ọzọ, bụ ...
Kedu ihe bụ New na WordPress 3.1
Mmelite WordPress ọhụrụ eruola. Ọtụtụ ihe agbanweela na usoro njikwa ọdịnaya a n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ugbu a mmelite nke nsụgharị ọhụrụ bụ bọtịnụ dị mfe. Maka ndị anyị na-ata ahụhụ nke a na-eme ya site na ftp, n'oge ụfọdụ anyị achọpụtala na ịdị mfe na-eme ka koodu ahụ ghara inwe amara. ...
Zagg, ihe kachasị mma maka iPad
Otu n'ime nsogbu ndị bụ isi maka imeghari na iPad bụ keyboard. A ga-enwe ndị na-amara ya, mana mgbe otu ọnwa gachara m na nkwubi okwu na ihe ndị a na-egbochi m ime nke a: N'aka nke aka, mkpịsị aka m buru oke ibu, na ịrụ ọrụ keyboard na-esiri m ike. Afọ 25 ka e mesịrị, enwere m ekele maka usoro ide ihe m ...
Acer nwewa blog Emmanuel wordPress
Ipad, ngwa 43 kachasị amasị m
Egwuru egwu, igwu a mbadamba a na m gwa Abigel ịkwụsị iji laptọọpụ na mmalite nke na-esote afọ. Amaghị m ma ọ bụrụ na nke a ga-ekwe omume emeela ka m chọọ isi ngwaọrụ ndị dochie ihe m na - eme - ma kwụsị ịme - na usoro m. 'Sdị ọrụ Apple na-adọrọ mmasị na ...
blog dwg Emmanuel wordPress
Ezi n'akụkụ nke Ipad
Njem ikpeazụ m mere na-amanye m ịnakwere iPad iji gbanwere echiche a na-enyo enyo, n'etiti obi ike ịhapụ ụgwọ na njem elekere 11, oke iwe nke njem ala maka awa 27 n'ihi Aeromexico - nke bụ ọdachi- ọ na-agba na aro nke ...
AutoDesk Bentley Systems Emmanuel wordPress
Usoro 10 nke otu ụbọchị
Olee otú m na-echeghị banyere ya na mbụ! ... mba, anwụbeghị m. Naanị otu iberibe subdomain gbanwere. Enweghị onye? Didn't agụghị m ụbọchị ole na ole gara aga. Ntughari uzo. Wodupiresi MU bụ ọdachi. Ah, a ga-enwerịrị arịrịọ na njedebe. Ọzọkwa emegharịa Google Maps API, na Live Writer. Hey! Google di ebube.…
Ugbu a ee, iji wụnye WordPress
Na ọkwa gara aga, anyị hụrụ otu esi budata ma bulite WordPress na Bochum anyị. Ugbu a, ka anyị hụ otu esi etinye ya. 1. Mepụta nchekwa data N'ihi na nke a, na Cpanel, anyị họrọ MySQL ọdụ data. N'ebe a, anyị na-egosi aha nchekwa data, na nke a, m ga-eji anwụrụ ọkụ wee pịa bọtịnụ imepụta. Lee otu o si egosi ...